Dashain tihar travel dakshina from SmartYatru
September 7, 2019 SmartYatru
नेपालीहरूको महान चाड दशैँ र तिहारको अवसरमा हामीले हजुरहरूको सामु “ट्राभल दक्षिणा” उपहार ल्याएका छौँ।
खुशी र पिडा
चाडपर्वको बेला खुशी र उमंगका साथै एक किसिम को पिडा पनि हुने गर्दछ नेपालमा । जब जब चाडपर्व आउछन तब तब यात्रा गर्नलाई बस, हवाइजहाज अथवा अन्य कुनै साधनको टिकट पाउन एकदम मुस्किल हुन्छ । अचनाक सबै तिर हाहाकार मच्चिन्छ । घन्टौ लाइन लगेर, जति माग्छन त्यति पैसा तिर्छु भन्दा पनि टिकट पाउन गाह्रो हुन्छ अझ भनौ कतिपएले त पँहुचका आधारमा टिकट पाउने गर्छन् ।
के हो त ट्राभल दक्षिणा?
यसपाली भने हामीहरुले हजुरहरुलाई यस्तै यस्तै समस्याबाट छुटकरा दिन र हजुरहरुको खुशीको सागरमा हाम्रो तर्फबाट पनि खुशीका दुई चार वटा छिटा भएपनि थप्ने कोसिस गर्दैछौ ।
SmartYatru ले दशैँ र तिहारको उपलक्ष्यमा हजुरहरू लाई असुविधा नहोस्, अधिक खर्च नहोस र सजिलैसँग आँफूले रोजेको राम्रो बस र सिटमा आफ्नो घर परिवारसँग यो महान् चाड मनाउन पाउनुहोस्; साथै आफ्नो साथी भाई सँग कतै भ्रमणमा सजिलै जानु पाउनुहोस् भनेर यो सुविधा दिन लगेको हो । टिकट बूकिङ गर्दा हरेक ग्राहकले ५-१५% सम्म छुट पाउनुका साथै थुप्रै अन्य उपहार पनि प्राप्त गर्नु हुने छ । उपहार विजेता को घोषणा हाम्रो टिमले गर्ने छ र हाम्रा समाजिक सन्जाल मार्फत सबैलाई जानकारी गराईने छ ।
घरै बसी बसी ल्याप्टप, कम्प्युटर, अथवा मोबाईल जे बाट आफुलाई सजिलो लाग्छ त्यसबाटै टिकट काट्न मिल्ने व्यवस्था SmartYatru ले मिलाएको छ । आफुलाई मनपरेको बसमा आफुले रोजेको सिटमा बसेर यात्रा गर्नुका साथै छुट तथा उपहार प्राप्त गर्दा पक्कै पनि कसलाई मन नहोला र ? SmartYatruले यो सम्भव बनाइदिएको छ तर सिमित समयको लागी । छुट तथा उपहारको व्यवस्था यही भदौ २१ गते देखी तिहारको टिकाको दिन सम्म लाई लागु हुनेछ ।
बस सन्चालक र रुटहरु
निम्न कम्पनीका तल बताइएका रुटहरुमा चल्ने बसका टिकट SmartYatru मार्फत काट्न मिल्ने छ :
Chitwan Safari Travel and Tours – काठमाडौँ – चितवन – काठमाडौँ , काठमाडौँ – पोखरा – काठमाडौँ (सोर्हखुट्टे, बालाजु, कलंकी हुदै पोखरा )
Deepjyoti Adventure Tours and Travels – काठमाडौँ – जनकपुर – काठमाडौँ
Kasara Tours and Travel – काठमाडौँ – चितवन – काठमाडौँ , चितवन – पोखरा – चितवन
Line up Travels and Tours – काठमाडौँ – पोखरा – काठमाडौँ (सोर्हखुट्टे, बालाजु, कलंकी हुदै पोखरा)
New Road Travels and Tours – काठमाडौँ – पोखरा – काठमाडौँ
Savation (Mokshya) Adventure Travels – काठमाडौँ – पोखरा – काठमाडौँ (जोरपाटी, गौशाला, रातोपुल, सुन्धारा, सोर्हखुट्टे, कलंकी हुदै पोखरा )
Shuva Jagadamba Tours and Travels – काठमाडौँ – पोखरा (सोर्हखुट्टे, बालाजु, कलंकी हुदै पोखरा)
World Touch Tours and Travels – काठमाडौँ – पोखरा (सोर्हखुट्टे, बालाजु, कलंकी हुदै पोखरा)
Tahalka Travels and Tours – बनेपा – पोखरा – बनेपा, भक्तपुर – पोखरा – भक्तपुर
टिकट बूक गर्न यहाँ Click गर्नुहोस्
सजिलो सुविधा का साथै SmartYatru ले सक्दो धेरै पैसा बचत होस् भनेर यो “ट्राभल दक्षिणा” योजना हजुरहरूको सामु ल्याएको हो।
पैसा बचत गरौं, सजिलो बुकिंग गरौं, SmartYatru प्रयोग गरौं ।
POST / ZIP CODES IN NEPAL